SIDA LOO QORSHEEYO XAGAAGA XAGAAGA, QAABEYNTA IYO NAQSHADEYNTA - COTTAGE
Ugu Weyn Ee Cottage
Sida loo qalabeeyo beerta
Mulkiilaha beerta oo dhan wuxuu doonayaa in uu isha ku hayo marka la eego qiyaasta saxda ah iyo khadadka saxda ah, iyo in gebi ahaanba dhulka hoose ee si buuxda uula socdaan dhammaan fikradaha mustaqbalka milkiilaha, qorshahiisa haboon ayaa iman doona badbaadinta.
Sidee loo wajahaa arrimaha qorshaynta?
Inaad ku fekereysid inaad ka fikirto qaabeynta beerta beerta lix ama wax ka badan acres, marka hore dhamaantood ka jawaab su'aalaha soo socda:
Waa maxay gargaarka degaanka? Goobtu waxay noqon kartaa mid degan ama meel u dhow dooxooyinka, buuraha iyo xataa buuraha. Ma aha oo kaliya dhismaha guryaha iyo dhismayaasha kale, laakiin sidoo kale nidaamyada dhismayaasha injineernimada waxay ku xiran yihiin dhulka la doortay.
Muxuu yahay qaabka sawirka: qaabka caadiga ah ama saddex xagal, oo leh geeso wareegsan?
Waa noocee carrada? Waxaa laga yaabaa in ay tahay bac, miro ama dhoobo culus ama loamy dhexdhexaad ah.
On carrada dhoobo, ma dhirta oo dhan ma horumarin karaa sida ay lagama maarmaan u, taas oo macnaheedu yahay ma waxay ku farxi doonaan leh ubax qurux badan iyo goosashada chic.
Xaaladahaan, waxaa lagu talinayaa in lagu sii bacrimiyo aagga bacaadka bacrin ah.
Miyuu dabiiciga ah ee biyaha ku jira iyo maxay tahay heerka biyaha dhulka? Joogitaanka waxay kuxirantahay nidaam dheeri ah oo qalabaysan.
Sidee meeshan u dhigtaa dhibcaha wadnaha?
Ma taqaanaa? Asalka astaamaha muuqaalka ayaa weli ku jira qarnigii XIX ee qarnigii koobaad, marka beeraha ugu qurxan ee ugu qurxan. Beerta Baabiloon ee Baabiloon, beeraha quruxda badan iyo qurxoon ee Masaarida ayaa si weyn u saameeyay horumarka sii kordhaya ee farshaxanka beerta. Sanado badan, qaabka isbeddelay iyo walxo kala duwan ayaa lagu daray. Gobol kasta wuxuu lahaa qaab u gaar ah ee naqshada muuqaalka.
Sidee loo qaabeeyaa dhismayaasha xagaaga xagaaga?
Ka dib markii aad iibsanayso xagaaga xagaaga, waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah dhamaan qorshooyinka qorsheynta guriga, iyo sidoo kale naqshadeynta dhirta iyo muuqaalka muuqaalka.
Si taxadar leh u fikirka-qaababka qaab-dhismeedku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka fogaato khaladaadka soo baxa marka ay rusheeyeen ama ay dillaacayaan, iyo sidoo kale inay helaan ikhtiyaarka ugu fiican ee isticmaalka caqliga ee dhulka oo idil.
Xagee loo geynayaa guriga?
Caadi ahaan, qorshaynta degaanka magaalada ayaa bilaabmeysa iyadoo la go'aaminayo meesha uu guriga ku yaal, iyo qorshaha dheeraadka ah ee tooska ah wuxuu si toos ah ugu xiran yahay meeleynta dhismaha dhexe.
Tani waxay kordhin doontaa aagga dhirta qorraxdu jeceshahay, oo ku farxi doona quruxdiisa quruxda badan ama soo iibsiga hodan ah.
Haddii aad doonayso inaad u isticmaasho goobta kaliya sida meel lagu nasto miyiga usbuuca wiigga ah, ka dibna meeleynta guriga waa in ay ahaato mid isku dheelitiran fikradaha naqshadeynta oo si cad u habboon soo bandhigista masraxa.
Halkan waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo dhawr arrimood:
Socodka biyaha dhulka.
Goobta u dhaw hoyga deriska ah.
Joogitaanka dhirta weyn ee aan laga saari karin.
Helitaanka isgaadhsiinta iyo raaxaysiga goobta ay ku yaalaan.
Kala soocitaanka goobta kuxiran dhulalka dadweynaha.
Suurtagalnimada dhismaha dhismooyin dheeraad ah.
Mid kasta oo ka mid ah qodobada kor ku xusan waxay saamayn ku yeelan karaan dhismaha mustaqbalka guriga. Intaa waxaa dheer, in badan oo iyaga ka mid ah ma ogolaanayaan in ay dhisaan guri, sababtoo ah xeerarka, sharciyada iyo xeerarka waa la jabiyaa.
Guryaha celceliska guud ahaan waa lix boqol oo mitir oo laba jibbaaran. Xaaladdan oo kale, naqshadeynta degaanka magaalada ayaa ka wanaagsan in la bilaabo daraasadda horumarinta qorshaynta ee aaggaaga. Waxay xustay dhammaan isgaadhsiinta, xajmiga sawirada, goobaha wadooyinka iyo jidadka.
Ma noqon doonto meel ka baxsan si aad u ogaatid meelaha dhulka hooseeya iyo qoyaanka ciidda. Tani waxay si toos ah u saameyn doontaa dhismaha aasaaska iyo nolosha shaqada ee dhismaha.
Markaad horey u ogtahay waxa, meesha iyo sida kuugu taal boggaaga oo ku xiran, waxaad qorsheyn kartaa xajmiga gurigaaga mustaqbalka. Qorsheha ayaa adiga laftigaa ku soo jiidan kara.
Arrinta isgaadhsiinta, la xiriir maamulaha goobta dhismaha, iyo haddii aysan weli jirin, markaa weydii goorta iyo meesha la dhigayo. Marka ugu dhow ee guriga waa in xuduudaha la oggol yahay ee goobaha, booska badan oo jiri doona qaabeynta muuqaalka ama baahiyo kale oo shakhsi ah oo u baahan meel bannaan.
Xagee loo dhisaa qubeyska iyo musqusha xagaaga?
Qorsheynta dhulku waa inaysan ku koobnayn hal guri. Ha ilaawin xarumaha fayadhawrka shakhsi ahaaneed, iyo sida ugu habboon ee meelaynta, waxay noqon laheyd mid sax ah si loo dhiso hal dhisme caadi ah ee qubeyska iyo musqusha.
Xaaladdan, ma jiri doonto baahi loo qabo dhismaha kala daata ee guryaha kala duwan, kaas oo udhexeeya midba midka kale, oo kaliya ku jiraa meel banaan oo muhiim ah.
Tani waxay si gaar ah u tahay haddii horumarinta aagga magaalooyinka ee 6 acres aanay ku dhicin iyadoo la adeegsanayo naqshadeeyayaasha xirfadleyda ah, laakiin gacmahooda.
Marka la abuurayo mashruuc beerta, waa in la tixgeliyaa arrimaha soo socda:
Dhismaha la qeexay waa inuu ka soocaa kuwa kale, maadaama ay lagama maarmaan tahay in la dhiso biyo socda oo joogto ah, gudaha gudahoodna waxaa jiri doona heer sare oo qoyaan ah.
Waa in ay jirtaa iftiin wanaagsan oo gudaha ah, sidaa darteed geedaha ballaaran oo leh taajajin ballaaran oo ballaaran waa inaanay u dhowaan.
Go'aanso naftaada baahida aasaasida aasaasiga ah, sababtoo ah ma sameyn kartid markaad dhiseyso unug dhaqaale oo buuxa.
Waa muhiim! Markaad qabatid shaqada, isticmaal aaladda shaashadda. Xalkani waa mid aad u awood badan oo maaliyadeed iyo qalabkoodu ma qaadan doono waqti badan iyo dadaal.
U hubso inaad tixgeliso tayada qalabka loo isticmaalo dhismaha.
Marka hore, qaabeynta iyo naqshadeynta dacha waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo isticmaalka ugu haboon ee geeska gees kasta, oo dhuumanaya waxyaabo aan macquul ahayn.
Dhismooyinka beeraha ayaa si wanaagsan loogu meeleeyaa meelo qoto dheer oo beerta ah, waana in la dhiso hab aan habooneyn oo aan qorraxda u dhigin meelo cagaaran isla markaana isla markaana ka ilaaliya aagga dabaysha.
Haddii aysan suurtogal ahayn in dhismayaashaas ay ka soo baxaan guriga ama goobta qolka lagu dabaasho, markaa waxaa jiri kara hab ka baxsan. - beerashada cagaarka cagaaran. Sidaa daraadeed quruxda quruxda badan ee quruxda badan ayaa qarin doonta dibada. Xulashada ugu wanaagsan ee dhismaha dhismaha noocan oo kale ah waxay ahaan doontaa dhinaca waqooyi-galbeed ee aagga magaalada.
Halkee laga helaa aagagga madadaalada, iyo maxay tahay inay ku jirto?
Ma jiro hal meel oo sax ah ee meeleeynta goobta madadaalada ee beerta. Meelaha laybereeriga ayaa loo qaybin karaa qaybo kala duwan oo ku yaal dalka oo idil. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa hal-gooni oo gaar ah, oo si gooni ah u taagan meel u habboon milkiilaha.
Xuddunta oo la socoto clematis waxay u adeegi doontaa quruxda quruxda badan ee dhulka. Dhismahan oo kale wuxuu noqon doonaa mid aad u raaxo badan oo xiiso leh inuu ku fekero fikradahaaga, ka qarinta qorraxda qiiqa, dabayl xoog leh ama roob culus.
Waxaad ka kaban kartaa aagga madadaalada leh noocyo kala duwan oo jardiinooyin ah, balli qurxoon, ama geedo jeexan oo jecel qoyaanka. Dariiqyada isdaba jooga ee leh dhagaxyo badan oo midabo leh ayaa lagu soo bandhigayaa dhinacyada waxay u egyihiin kuwo aad u cajaa'ib leh.
Meesha ka baxsan duleedka waxaad ku dhisi kartaa qubeys ama geli kartaa barkad. By iyo ballaadhan, qorshaynta naqshadeynta muuqaalka waxay kuxirantahay oo kaliya waxay ku xirantahay maskaxda iyo kartida dhaqaale ee milkiilayaasha goobta.
Ma taqaanaa? Horumarka horumarinta sayniska iyo farsamooyinka farshaxanka ee farshaxanka wuxuu ahaa Renaissance. Waxay ahayd xilligaan in isku dayga koowaad ee isuduwidda dhismaha iyo muuqaalka muuqaalka. Waxyaabaha lagu soo bandhigay beeraha.
Meeleynta sariiraha ubaxyada iyo qurxinta
Ka fikirida naqshadda dhismaha, gaar ahaan haddii aagga uu yaryahay oo ku dhowaad 6 acres, waxaa fiican in la sameeyo waraaq waraaq ah si loo fududeeyo dhismaha dheeraadka ah ee dhirta iyo dhirta dhirta gacmahaaga. Qubeysi beerta ubaxa horteeda guriga, si cad u ah, waa ka fiican in la sameeyo qaabeynta midabka.
Sidaa darteed, waxaa suurtogal ah in aan la fulin qorshaha saxda ah ee meeshan loo qoondeeyey meeshan, laakiin sidoo kale in lagu xisaabiyo baahida loo qabo abuurka iyo qiyaasta bacriminta loo baahan yahay. Dhammaan arrimahan ayaa lagama maarmaan u ah inay turjumaan fikradaha dhabta ah
Ogsoonow, inaad doorato meel ka hooseysa sariirta ubaxa, sidoo kale waa lagama maarmaan in la xisaabiyo dhamaan wixii suurtogal ah ee daryeelka mustaqbalka ee isaga. Ha qorsheynin inaad degto meel fog. Waxaa lagama maarmaan ah in la beero dhirta sida hab mid kasta oo iyaga ka mid ah si xor ah loo gaari karo.
Meelaha ka badan laba mitir iyo mitir nus ah maaha inay qiimeeyaan. Waa dabiiciyan, dabcan, si aad u doorato meel sariirta ubaxa u dhow guriga, laakiin suurtagalnimada in lagu dhajiyo beeraha ubaxyada kala duwan ee qaybaha kala duwan ee dhulka aan laga saarin. Tusaale ahaan, meelaha ay ku yaallaan waddooyinka u dhow biyaha yar yar ama gasebos ayaa ah kuwo muhiim ah.
Waa muhiim! Isku day in aad go'aansato meesha sariiraha iyo qurxinta kale ee marxaladda qorsheynta.
Qorshee meelaynta sariirta ubax leh kayd yar oo dhul leh, dhammaantood si lama filaan ah waxaad jeceshahay inaad ballaariso mustaqbalka. Natiijada muuqaalku waxay badanaa ka badan tahay qorsheynta, markaa, iyada oo la abuurayo qaababka kala duwan ee muuqaalka, ha ku xaddidin meeraha cabbir gaar ah.
Fikradda qurxinta barxadda ee ku xiran nooca waxqabadka ay sameeyeen naqshadeeyayaasha xirfadleydu waxay u sahlanaan doonaan fulinta, iyagoo haysta noocyo kala duwan oo lagu qurxiyo qaabab gaar ah. Qaybaha farshaxan ee waaweyn ayaa toos u dhiga beerta xayawaanka degaan gaar ah, soo bandhigida astaamaha dhabta ah iyo abuurista duruus.
Tusaale ahaan, farshaxanka dadka ama xayawaanka, sawirro waaweyn, ilo iyo ceelasha waa in lagu dhejiyaa meelaha bannaan. Qurxinta yaryar waxay siinaysaa barxad gaar ah. Beerta waxay jecel yihiin sawirro muuqaal ah oo xayawaan ah iyo calaamado caan ah, oo lagu sameeyey qaabka soo jiidasho leh iyo "jilicsan".
Waxa ugu muhiimsan waa in la ogaado qiyaasta tirada, sababtoo ah xitaa walxaha qurxinta leh ee quruxda badani waxay u rogi karaan aqallada oo lagu ciyaaro meel lagu ciyaaro. Dabcan, haddii aadan ujeeddadaas ujeeddo ujeedin.
Naqshadeynta casriga ah ee casriga ah, ujeedka isdhexgalka ee doorka madaxbannaan iyo doorka shaqeeya waa mid la aqbali karo. Sidaa darteed, tusaale ahaan, xayawaanka, tufaaxa iyo shimbiraha shimbiraha ayaa muujinaya xannaanaynta xoolaha, laakiin fasiraadda qurxinta qurxinta waxay u adeegaan sida munaasabadaha naqshadeynta beerta gudaha.
Deedka dayrka, ubaxyada ama shaashadaha wax lagu duubo waxay noqon karaan kuwo qurux badan oo isbarbar socda oo la mid ah hawlaha kale ee hawlaha.
Xaggee si loo dhigo aqalka dhirta lagu koriyo iyo beerta?
Naqshadeynta dhismaha beerta waxaa la siiyaa meel qorrax leh. Si aad goosashadaada had iyo jeer u noqotid tirada, waxaad tixgelisaa beerashada dhirta si aanay u dhicin dhismayaasha xagaaga xagaaga.
Waa muhiim! Joojinta ikhtiyaarka kuwa ama kuwa kale ee beerta iyo beerta, tixgeli dhammaan sifooyinka ay ka soo degaan iyo daryeelkooda.
Dhirta qaarkeed waxay u baahan yihiin qoyaan joogto ah, qaarna kama baqayaan abaaro, kuwa kale ma koraan wakhti dheer iyada oo aan qorraxda lahayn, iyo kuwa afraadna waxay dareemayaan raaxo leh in ay hadhuudh ugu badnaayeen.
Ogaanshaha dhammaantiis, waxaad si sahlan u qeexi kartaa dhaqan kasta oo ku yaala beerta ama beerta. Sidaa darteed, warshad kasta waxay ku kori doontaa xaalado raaxo leh oo ay ku farxi doonto milkiilayaasheeda leh miro fiican.
Sida dhirta aqalka dhirta lagu dhajin doono waxay yeelan doontaa saameyn weyn ma aha oo kaliya xaaladaha dhismaha, laakiin sidoo kale on dhalidda dalagga beeray. Haddii aad doorato meel khalad ah marka la eego qorraxda iyo culeyska dabaysha, markaa waxaad la kulmi kartaa dhowr daqiiqadood oo aan fiicnayn: biqilka dalagga oo liita, qaloocnaanta qoyaanka iyo heerkulka leh waxqabadka ugu wanaagsan.
Beergoosku wuxuu noqon doonaa mid aad u liita oo dhadhankiisu hooseeyo. Haddaba sida habboon si habboon u dhigo aqalka dhirta lagu koriyo goobta, si ay xaaladaha oo dhan u buuxiyaan shuruudaha? Ogsoonow shuruudaha ugu muhiimsan:
Muuqaalka dhulka. Tani waa inay ka mid noqotaa qulqulka goobta la soo jeediyay ee aqalka dhirta lagu koriyo, joogitaanka tiro badan oo kaydka, keydinta ciidda iyo heerka biyaha.
Jihada iftiinka. Dhirta aqalka dhirta lagu koriyo waxay u baahan tahay qorrax aad u badan. Tan waxay ku xiran tahay xawaaraha koritaankooda. Ha ku dhejin meelaha lagu koriyo meelaha ay iftiinkoodu xannibo geedo waaweyn ama dhaadheer, guryo degaan ama guryo beereed.
Tayada carrada ee meesha uu ku yaal aqalka dhirta lagu koriyo.
Kala-duwanaanshaha degaanka. Dhammaan isgaarsiinta lagama maarmaanka ah waa in ay ahaato mid xiran oo adeegu waa inuu ahaadaa sida ugu macquulsan Meeleynta haboon ee albaabka iyo joogitaanka albaabka.
Tusaalooyin diyaar ah
Qorsheynta naqshadeynta beerta mustaqbalka ama guriga xagaaga waa hab lagu dhisaayo waxtarkeeda maxaa yeelay waa farsamo. Marka xigta, waxaad baran doontaa sida ugu wanaagsan ee loo qorsheynayo aag yar oo ah 6 acres, iyo laba goobood oo waaweyn.
Doorka ugu muhiimsan ayaa lagu ciyaari doonaa si khaas ah fikradaada, kadibna kaliya markaa wakhtiyada dhismayaasha farsamada ay iman doonaan.
Calaamadinta 6 acres
Si habboon u qorshee meelaynta guriga dalka iyo walxaha kale ee naqshadda muuqaalka, iyo sidoo kale samaynta mashaariicda saxda ah ee qorshe ah 6 acres - ma aha hawl fudud. Meelahaas oo kale, wax walba waa wax la isku qurxiyo oo, ugu muhiimsan, si firfircoon: meel guri ah, meel bannaan oo bannaan oo dhismo kale ah, iyo sidoo kale beerta khudradda iyo aqalka dhirta lagu koriyo.
Guriga waa in lagu dhisaa meel sidaas oo kale ah si aan hoos ugu dhicin beerta mustaqbalka ama beerta. Dhirta midhaha ah ee geedaha ah ee masaafo siman oo saddex mitir u jirta waqooyi ilaa koonfur ayaa bixin doona daboolka ugu fiican. Waxaa lagu talinayaa in ay ku beeraan dhowr saf.
Meesha ugu fiican ee guriga ayaa noqon doonta xadka waqooyiga ee goobta. Sidaa darteed, dhirta ma xanuunsan doonaan dabaylo. Qalabka dhismaha, waxaad ka qaadan kartaa dhinaca waqooyiga meel u dhow xaydaanka. Isla garabkani wuxuu ku guuleysan doonaa rakibidda lagu koriyo oo lagu beeray khudaarta.
Sidee loo calaamadiyaa 10-15 acres?
Si loo dhiso guryaha beeraha ee dhulalka shan iyo toban mitir labajibbaaran, maaha wax sameeya mashaariicda lix boqol oo mitir oo labajibbaaran, oo ka yaabi kara awooda meelaynta. Xitaa on a dhul of toban acres waxaa jira horeba meesha loo roam.
Meelahaas, geedi socodka qorshaynta waxaa ka mid ah ma aha oo kaliya qaybo ka mid ah dhismooyinka kor ku xusan, laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa in la ogaado fikrado dheeraad ah oo ah naqshad dhuleed.
Meelaha of 15 acres, waxaad isku koobi kartaa dhowr noocood mar. Tusaale ahaan, habdhismeed isku dhafan ayaa ka baxsan qaababka joomatari ee adag. Halkan waxaad ka dhigi kartaa niyad jajab leh adigoo si xor ah u dhigaya qurxinta iyo dhirta, waxayna u muuqan doontaa mid cajiib ah oo soo jiidasho leh.
Ma taqaanaa? Ugu sarreysiga horumarka muuqaalka muuqaalka dhulku wuxuu dhacaa qarnigii labaatanaad. Muddadani waxay ahayd raadinta hannaanka cusub, soo-kabashada gaar ahaan isku-dhafka dhismaha iyo muuqaalka. Doorka weyn waxaa lagu ciyaaray dhirta.
Maxay caleemaha u muuqdaan iyo sida looga takhaluso?
Maxaa la sameeyaa haddii spathiphyllum uusan korin, sidee loo badbaadiyaa "farxadda dumarka"?
Faa'iidooyinka muuska: ilaha fitamiinada iyo niyadda wanaagsan!
All oo ku saabsan gooyn dhirta Gloxinia: shuruucda beerto iyo rooting dushooda caleemaha
Haddii aad ku cusub tahay warshadaha digaaga oo aad go'aansatid inaad bilowdo waayo-aragnimadaada naas-nuujinta, "feker" waa habka ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo! Tani waa caleemo hore oo la xaqiijiyay oo ah digaag hilib ah, taas oo si guul leh loogu isticmaalo taranta taranka taranka cusub iyo noocyo badan oo cusub.Ducks kuwaas oo dhan meel kasta oo labadaba ku jira miisaanka warshadaha iyo beeraha yaryar, oo ay ku kasbadeen faan wanaagsan oo ay ugu mahad celinayaan qabsashadooda, koritaanka degdegga ah iyo hilibka dheelitiran oo wanaagsan. Read More
Noocyada ugu caansan ee digaagga
Tilmaamaha Tropic - "Palisota": daryeelka iyo sawirka dhirta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cottage 2020